कांग्रेस १४औं महाधिवेशन : सभापतिमा पाँच उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दै, कसले मार्ला बाजी ? - ramechhapkhabar.com
कांग्रेस १४औं महाधिवेशन : सभापतिमा पाँच उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्दै, कसले मार्ला बाजी ?
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका एक जनाले फिर्ता लिएका छन्। सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका युवराज न्यौपानेले फिर्ता लिएका हुन्। उम्मेदवारी फिर्ता लिन आइतबार १२ः३० बजेसम्मको समय तोकिएको थियो।
उनले पत्रकार सम्मेलन गरी अब आफ्नो समर्थन सभापतिका पदका उम्मेदवार डा. शेखर कोइरालालाई रहेको जनाएका छन्। न्यौपानेले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा २८ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए। त्यसमा उठाएका सबै विषयलाई डा.कोइरालाले आत्मसाथ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले उनलाई समर्थन गरेको न्यौपानेको भनाइ छ।
अब कांग्रेस सभापतिको प्रतिस्पर्धामा पाँच जना उम्मेदवार छन्। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, डा. कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
कांग्रेस विधानअनुसार, सभापतिमा विजयी हुन ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्छ। कुनै उम्मेदवारले ५१ प्रतिशत मत प्राप्त गर्न नसकेमा दोस्रो चरणमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि सोमबार बिहान ८ बजेदेखि मतदान हुने कार्यसूची रहेको छ।
युवराज न्यौपानेले सभापतिकाे उम्मेदवारी फिर्ता लिए, शेखरलाई समर्थन गर्ने
नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराएका युवराज न्यौपानेले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । शनिबार भृकुटीमण्डप पुगेर न्यौपानेले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सभापति पदमा उम्मेदवारी दिएका थिए ।
तर उनले आज उम्मेदवारी फिर्ता लिएर सभापतिका अर्का उम्मेदवार शेखर कोइराला खेमालाई सर्मथन गर्ने भएका हुन् । उनले आफुले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको र कोइराला प्यानललाई समर्थन गर्ने जानकारी दिए ।